Covid-19 ကာလမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဘယ်လိုသက်သာအောင်နေမလဲ ? - Phoenix Emperor
Covid-19 ကာလမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဘယ်လိုသက်သာအောင်နေမလဲ ?
Home / Blog / Covid-19 ကာလမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဘယ်လိုသက်သာအောင်နေမလဲ ?
ဒီအချိန်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရောဂါကပ်ဆိုးကြောင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေး ဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီး အကြောက်တရား၊ဝမ်းနည်းမှု၊စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှု စတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်များကိုအနည်းနဲ့အများတော့ခံစားနေကြရပါတယ်။အဲ့အတွက် ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ယောက်ထဲတွေးပြီးခံစားနေတာထက်စာရင် ကိုယ်ယုံကြည်ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့အတူ စကားများများပြောပေးသင့်ပါတယ်။
SNS တွေကတက်လာတဲ့ Covid-19 နဲ့ပက်သက်တဲ့သတင်းမှန်သမျှဟာ အမှန်တွေကြီးမဟုတ်တာကိုလဲ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ သတင်းအရင်းအမြစ်တွေကတင်တဲ့ သတင်းတွေကိုသာ ပုံမှန်စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် မိမိနေထိုင်ရာနိုင်ငံ၊ဒေသ တွေမှာရှိတဲ့ သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာန နဲ့ ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ Official Website, Pages နဲ့ WHO ကသတင်းတွေကိုသာ စောင့်ကြည့်စေလိုပါတယ်။ဒီအချိန်ကာလမှာ Rumors တွေ Fake news
တွေကြောင့် Stree များနေမဲ့အစား ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်နေပြီး စနစ်တကျကာကွယ်နေထိုင်နေတာဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။သတိတော့ရှိပါ ဒါပေမဲ့ အကြောက်မလွန်သင့်ပါဘူး။
တကယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုယ် လိုတာထက်ပိုပြီး စိုးရိမ်းဖိစီးမှုများနေတယ်လို့ သံသယရှိပါက သင့်ရဲ့ SNS တွေ Television တွေကနေတစ်ဆင့် သတင်းတွေဖတ်ခြင်း ကြည့်ရှုခြင်းစတဲ့ သုံးစွဲတဲ့အချိန်ပမာဏကို Limit လုပ်သင့်ရင်လုပ်လိုက်ပါ။သတင်းတွေစောင့်ကြည့်တာဟာမမှားပေမဲ့ သင်ဟာ SNS ကိုအလွန်အကျွန်သုံးစွဲနေပြီး သတင်းမှားတွေ သို့မဟုတ် စိတ်မချမ်းသာစရာတွေသာဆက်တိုက်မြင်နေရမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့အကြောက်တရားနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုကြီးထွားလာစေမှာပဲဖြစ်လို့ လိုအပ်သလောက်သာသုံးသင့်ပါတယ်။
အိမ်မှာနေထိုင်ပြီး ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် အစားကောင်းကောင်းစာပါ၊အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ၊လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပါ၊သင်ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ Social Contact မပျက်ပါစေနဲ့ Video call ခေါ်တာ ဖုန်းပြောတာမျိုးတွေ မကြာမကြာလုပ်ပေးပါ။မိသားစုနဲ့အတူ မိသားစုအချိန်လေးဖန်တီးပါ။ GAME ကစားပါ။